Windows 10 | RAM အားလုံးဘယ်လိုသုံးမလဲ မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Ignacio Sala | 08/10/2021 12:00 | လည်ပတ်မှုစနစ်များ, Windows ကို
သင်၏ကွန်ပျူတာသည်ပုံမှန်ထက်နှေးကွေးလာသောအခါသင်ကြိုးစားရန်သင့်ကွန်ပျူတာ၏ဆော့ဝဲများနှင့်ရောမွှေလိုက်ပါ သင့်အားလူငယ်အချို့ကိုပြန်ပေးပါမရ။ နောက်ထပ်နှစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် processor ကိုပြောင်းလဲခြင်း (သို့) RAM ကိုချဲ့ခြင်းတို့၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်းသင်စဉ်းစားပါ။
သို့သော်၎င်းသည်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးသောအဖြေမဟုတ်ပေ၊ အကြောင်းမှာသင်၏ကွန်ပျူတာသည် software နှင့်သင်၏ hardware နှစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောကွဲပြားသောအကြောင်းများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သိလိုလျှင် Windows 10 မှာ RAM အားလုံးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ ဆက်ဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
1 ငါတို့ဘယ် Windows ဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းပြီးပြီလဲ
2 RAM အားလုံးကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ
2.1 အဆင့် ၁ - သတ်မှတ်ချက်များကိုရှာဖွေပါ
2.2 အဆင့် ၂ - ငါတို့ install လုပ်ထားတဲ့ Windows ဗားရှင်းကိုစစ်ဆေးပါ
2.3 အဆင့် ၃ - Windows310 -bit ကို install လုပ်ပါ
3 32 နှင့် 64 bits အကြားခြားနားချက်များ
ငါတို့ဘယ် Windows ဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းပြီးပြီလဲ
Windows 10 သည် 32-bit နှင့် 64-bit အတွက် Windows တွင်နောက်ဆုံးဖြန့်ချိခဲ့သောနောက်ဆုံး operating system ဖြစ်သည်။ သင်နားမလည်နိုင်သောနည်းပညာများသို့မသွားဘဲ 64-bit ပရိုဆက်ဆာများသည်လိုအပ်ချက်များမှမွေးဖွားလာသည် ကွန်ပျူတာတွေမှာ memory ပိုသုံးပါ32-bit ပရိုဆက်ဆာများသည်4GB သာသုံးနိုင်သည်။
32-bit ပရိုဆက်ဆာများသည် 32-bit operating system များနှင့် applications များကိုသာကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ 64-bit ပရိုဆက်ဆာဖြစ်နိူင်သည် 32-bit နှင့် 64-bit operating system နှစ်ခုလုံးမှစီမံကွပ်ကဲသည်။
Windows 10 သည်အသုံးပြုသူအားလုံး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် 32-bit နှင့် 64-bit ဗားရှင်းများဖြင့်ရနိုင်သော Windows ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းဖြစ်သော်လည်း Windows 11 ဖြင့် Microsoft သည်သုံးစွဲသူများအားစတင်ရန်တွန်းအားပေးရန်နောက်တစ်ဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာအဟောင်းများကိုအဆင့်မြှင့်ပါ ၎င်းကို 64-bit version တွင်သာရနိုင်သည်။
32-bit နှင့် 64-bit ပရိုဆက်ဆာများနှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်များကိုသူတို့၏ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သိရန်အချိန်ရောက်လာသည်။ Windows 10 တွင် RAM အားလုံးကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ။
အဆင့် ၁ - သတ်မှတ်ချက်များကိုရှာဖွေပါ
ငါတို့သိဖို့ပထမဆုံးလိုအပ်တာကဘာလဲ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းတွင်တပ်ဆင်ထားသော RAM ပမာဏကိုသိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများ၏အသေးစိတ်အချက်အလတ်များကိုသိရန် CPU-Z application ကိုဤမှတဆင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သောအခမဲ့အပလီကေးရှင်းကိုသုံးလိမ့်မည်။ link ကို.
ငါတို့က Windows configuration options တွေကတဆင့်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာမှန်ပေမယ့်လည်း RAM 32 ပမာဏရှိရင်ငါတို့ရဲ့အချက်အလက်တွေကလွဲမှားနိုင်တယ်။
ငါတို့သည်ငါတို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အပလီကေးရှင်းကို install လုပ်ပြီး install ပြီးတာနဲ့အဲဒါကို execute ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အပလီကေးရှင်းမှသုံးသောစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည် စက်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကိုစုဆောင်းပါ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါသော tab များပါသောဇယားတစ်ခုကိုပြလိမ့်မည်။
ပထမ ဦး စွာငါတို့သိရန်စိတ်ဝင်စားသောအချက်အလက်များသည် install လုပ်ထားသောမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်သောကြောင့် tab ကိုနှိပ်ပါ မှတ်ဉာဏ်မရ။ အထွေထွေကဏ္,၊ အရွယ်အစားကဏ္inတွင်၊ သင်တစ်ကယ်ထည့်သွင်းထားသော RAM ပမာဏကိုပြထားသည်။ ငါ့ကွန်ပျူတာမှာ 16GB လောက်ရှိတယ်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏မှတ်ဥာဏ်အမျိုးအစား (ကျွန်ုပ်၏ DDR3) နှင့်ကြိမ်နှုန်းမြန်နှုန်း 800 MHz (798.1) ကိုလည်းပြသသည်။ ဤအချက်အလက်များသိရန်လိုအပ်သည် ငါတို့အဖွဲ့ရဲ့မှတ်ဥာဏ်ကိုချဲ့ထွင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရင်ငါတို့ကမင်းရဲ့စွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့အတွက်ငါတို့တပ်ဆင်ထားတဲ့ memory အမျိုးအစားကို ၀ ယ်ရမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာ၏ RAM မှတ်ဉာဏ်ကိုချဲ့ထွင်လိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သိရန်လိုအပ်သောအခြားအချက်အလက်များ မှတ်ဉာဏ်ကိုချဲ့ထွင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အခမဲ့အပေါက် (slot) တစ်ခုရှိလျှင် ဒါမှမဟုတ် memory ပိုပါတဲ့ modules အသစ်တွေ ၀ ယ်ရမယ်ဆိုရင်။ ဤအရာအား tab မှတဆင့် Memory Slot Selection အပိုင်း၌သိနိုင်ပြီး drop-down ကိုနှိပ်ပါ။
ငါ့ကွန်ပျူတာမှာငါ့မှာ RAM 16 GB ရှိပြီးအပလီကေးရှင်းကငါတို့ကိုပြထားတဲ့အတိုင်းခွဲထားတယ် 8GB modules နှစ်ခုမရ။ မှတ်ဥာဏ် module တစ်ခုထည့်ရန် slot တစ်ခုစီကို 8GB module တစ်ခုဖြင့်နေရာယူသည်။ ငါမှတ်ဥာဏ်ကိုချဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဘုတ်အဖွဲ့ကလက်ခံရင်၊ စုစုပေါင်း 16GB အတွက် 32GB modules နှစ်ခုကိုငါဝယ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်ငါတို့အဖွဲ့ကလိုအပ်တဲ့ memory ကို ၀ ယ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစခင်မှာငါတို့ကအဲဒါကိုသိထားရမယ် ဘုတ်အဖွဲ့မှထောက်ပံ့သောအများဆုံးမှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်
CPU tab တွင် board နှင့် processor model ကိုပြထားသည်။ ဤအချက်အလက်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်သူ၏ ၀ က်ဆိုက်သို့သွားရပါမည် လက်ခံနိုင်သောမှတ်ဉာဏ်ပမာဏအများဆုံးကိုသိပါ.
အဆင့် ၂ - ငါတို့ install လုပ်ထားတဲ့ Windows ဗားရှင်းကိုစစ်ဆေးပါ
ငါတို့ကွန်ပျူတာမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ဥာဏ်ပမာဏဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာသိတာနဲ့ငါတို့ Windows 10 မှာရှိသမျှမှတ်ဥာဏ်အားလုံးကိုအခွင့်ကောင်းယူချင်ရင်ငါတို့ဘယ် Windows ကို install လုပ်ထားလဲသိရမယ်။ မည်သည့် Windows 10 ဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ထားသည်ကိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့၊ ငါတို့က Windows configuration options တွေကို start menu မှာရှိတဲ့ cogwheel ဒါမှမဟုတ် keyboard shortcut Windows key + i မှတဆင့် access လုပ်ရပါမယ်။
ထို့နောက် System ကိုနှိပ်ပါ။
System အတွင်း၊ ဘယ်ဘက်ကော်လံတွင် About: ကိုနှိပ်ပါ။
စနစ်အမျိုးအစားအပိုင်းကိုကြည့်ရမယ်။ ငါတို့မှာ 64-bit ဒါမှမဟုတ် 32-bit version ရှိရင်ဒီမှာပြလိမ့်မယ်။
အဆင့် ၃ - Windows310 -bit ကို install လုပ်ပါ
64-bit operating system ကိုပြမည့်အစား၎င်းသည် 32-bit operating system ကိုပြသသည် Windows version သည် memory အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်သည်။
သောကြောင့် ငါတို့ကွန်ပျူတာမှာရနိုင်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ဥာဏ်အားလုံးကိုသုံးချင်ရင်Windows 64 10-bit version ကို install လုပ်ရပါမယ်။
32 နှင့် 64 bits အကြားခြားနားချက်များ
4-bit ပရိုဆက်ဆာများကကမ်းလှမ်းသော memory 32 GB အတွက်အဓိကကန့်သတ်ချက်အပြင် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားကန့်သတ်ချက်များဥပမာ၊ ပိုများပြီးပိုနည်းသော applications များဖွင့်လာသောအခါ၊
application များစွာကိုအတူတကွဖွင့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်မည့် RAM ပမာဏ 4-bit version တွေကငါတို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ 32 GB ထက်အများကြီးပိုမြင့်တယ်မရ။ 32-bit ဗားရှင်းများသည်အဖွင့်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုအတွက်အများဆုံး2GB ကိုသုံးနိုင်ပြီး 64-bit operating system သည် RAM 128 GB အထိသုံးနိုင်သည်။
စဉ် 32-bit applications များသည် 64-bit operating system များတွင်အလုပ်လုပ်သည်ပွင့်လင်းသောအပလီကေးရှင်းအားစီမံနိုင်သောမှတ်ဥာဏ်ပမာဏကြောင့်ထပ်မံဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်ပါ။
Windows နှင့် 64-bit ဗားရှင်းများနှင့်အပလီကေးရှင်းများ၊ 32-bit ပရိုဆက်ဆာများနှင့်ကွန်ပျူတာများတွင်ထည့်သွင်း။ မရပါသို့ရာတွင် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် 32-bit ဗားရှင်းများကို 64-bit ပရိုဆက်ဆာများတွင်ထည့်သွင်းနိုင်လျှင်၊ လက်တွေ့တွင်မည်သူမျှပုံမှန်အားဖြင့်မလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည် memory သုံးစွဲမှုနှင့်ပရိုဆက်ဆာအရေအတွက်နှစ်ခုလုံးကိုကန့်သတ်ထားသည့်အပြင် 64- သုံးခွင့်မပြုပါ။ bit applications များ။ bits
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လည်ပတ်မှုစနစ်များ » Windows 10 RAM အားလုံးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ